गोङ्गबुमा अत्याधुनिक सिनेमा हल सञ्चालनमा – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१० आश्विन २०७७, शनिबार १८:४९ English
गोङ्गबुमा अत्याधुनिक सिनेमा हल सञ्चालनमा
काठमाडौँ, ३ कार्तिक । काठमाडौँको गोङ्गबुमा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न सिनेमा हल ‘आईएनआई’ सञ्चालनमा आएको छ । आईएनआई सिनेमा हलले आधुनिकता समायोजन गरी दर्शकहरुको मन जित्ने प्रयास गरेको छ । यसमा अरुको तुलनामा ठूलो स्क्रीन र आकर्षक पिक्चर क्वालिटी रहेको छ भने विलासितापूर्ण आरामदायी सीटको व्यवस्था छ ।
कर्माचार्य कम्प्लेक्स भित्र रहेको आईएनआई सिनेमा हलमा दुईवटा राम्रा दर्शकदीर्घा छन्, जहाँ एकैपल्ट दुईवटा सिनेमा देखाउन सकिन्छ । दुईवटा दर्शकदीर्घा (अडिटोरियम) मध्ये पहिलोमा १८१ सीट र दोस्रोमा १५४ सीट गरी जम्मा ३३५ सीट छन् ।
आईएनआईको विशेषता भनेको नेपालमा पहिलोपल्ट जी.डी.सी. सर्वर प्रविधि प्रयोग गरिएको छ, जसले गुणस्तरीय प्रदर्शन गर्ने क्षमता राख्दछ । कलात्मक नमूनामा निर्माण गरिएका यी प्रदर्शनदीर्घामा ब्राङ्को २० सी र डी ३ डी प्रविधि प्रयोग गरिएकोले दर्शकलाई पूर्ण मनोरञ्जन प्राप्त हुनेछ ।
३ कार्तिक २०७६, आईतवार ०९:०७ मा प्रकाशित